इलाममा २५ पुसदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेपछि राति नै काठमाडौं ल्याई आईसीयूमा भर्ना….;.
काठमाडौँ, ४ माघ । काठमाडौं ल्याइएको छ। डा. केसीको मुटुमा समस्या देखिएर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि आज बिहान ३ बजे हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याइएको हो।उनकाे अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेकाे छ ।...
आज बिहान ७. ३० बजे दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी प्रसूतिबाहेक सबै सेवा ठप्प
२ माघ, घोराही । पेशागत सुरक्षाका साथै अस्पताल सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका छन् । कर्मचारी संघर्ष समितिको आहृवानमा कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालयका साथै प्रशासनिक कक्षमा...
पाँच दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियालाई पोस्ने र चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कानूनभन्दा मृत्यु स्वीकार्य हुने बताएका छन् । खस्किँदो स्वास्थ्यलाई लिएर भेटका लागि आएका समर्थक एवं शुभेच्छुकले डा. केसीको...
न्यानो लुगा बाँड्ने अभियानमा वीरगञ्जका युवाहरु..
न्यानो बाँड्ने अभियानमा वीरगञ्जका युवाहरु भारतको दरभंगा घर भएका विजय झा वीरगञ्जको घण्टाघर नजिकै सुतिरहेका थिए । काम खोज्न वीरगञ्ज आएका उनले काम पाइसकेका थिएनन् । काम नभएपछि दाम भएन । सडकमा बास बस्नुको विकल्प...
ऐनाअगाडि उभिँदा के-के नमिलेजस्तो अनुभव हुन्छ, ‘स्तन राखें, अब यौनाङ्गबारे सोचिरहेकी छु’ ….
केटाकेटीले दुई-तीन वर्षकै उमेरमा आफ्नो लैङ्गिक चेतना थाहा पाउँछन् । त्यसैअनुसार व्यवहार देखाउन थाल्छन् । तेस्रो लिङ्गीले पनि सोही उमेरमा आफ्नो लैङ्गिक प्रस्तुति देखाउन थालिसकेका हुन्छन् । तेस्रो लिङ्गीका हकमा केटा भएर जन्मिएका बच्चा हुर्किंदै...
काठमाडौं, नेपालमै पहिलो पटक वातावरणमैत्री सेनेटरी प्याड उत्पादन गरिएको छ । राधा पौडेल पाउण्डेसनले चितवनको कृष्णपुरमा ‘मितेरी जैविक स्यानिटरी प्याड’ उत्पादन गरेको हो । फाउण्डेसनकी संस्थापक तथा सामाजिक अभियन्ता राधा पौडेलले भनिन्, ‘हामीले पहिलो...
म वीर्य बेच्छु ,मेरो वीर्यबाट कोही आमा बन्न सक्छिन् : यो मेरो धर्म हो
‘विक्की डोनर’ मा त अडल्ट तस्बिर लगाइएको थियो तर यहाँ त एउटा वाशरुम छ जहाँ पर्खाल, कमोड, धारा र वाशबेसिन छ । पहिलो पटक निकै असहज महसुस भैरहेको थियो । आफ्नो कोठामा हस्तमैथुन गर्नु र...
यसरि गर्छन महिला बियरको बोतलले पुरुष भन्दा बढी हस्तमैथुन : (हेर्नुहोस पुरा भिडियो सहित )
महिलाले कसरी गर्छन हस्तमैथुन र कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छन (हेर्नुहोस पुरा भिडियो सहित ) हस्तमैथुन यौन सुख प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो यौन क्रियाकलापको रुपमा रहेको पाइन्छ । अझै पनि समाजमा हस्तमैथुन गर्नु धार्मिक रुपले...
छिन-छिनमै पिसाब लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता हुनसक्छन् कारण !
असोज २२/ बानी भनौँ या बाध्यता, कसै(कसैलाई सामान्य भन्दा बढि नै पिसाब लागिरा’को हुन्छ। घरमै बसिराख्दा पनि आधा(आधा घण्टामा अथवा पन्ध्र(पन्ध्र मिनेटमा बाथरुम छिर्नै पर्ने हुन्छ। पानी बढि भएको होला भनेर कम पानी खान...
छाति तथा पेट पोल्ने समस्या छ ? छुटकारा पाउन अप्नाउनुहोस् यी उपाय !
असोज २१/ दौडधुपको युगमा हाम्रो गलत जीवनशैलीले गर्दा रोगले बढवा पाउन थालेको छ। कामको व्यस्थताले लामो समयसम्म खाना नखाएपछि जब पेट पोल्न थाल्छ अनि मात्र हामी खाना खाने गर्छौ। जसका कारण एसिडिटी बढ्न जान्छ।...